Rasaasa News – Asluub Darada Saxaafada Somaliya iyo Ogaan la Aanta Ethiopia
Asluub Darada Saxaafada Somaliya iyo Ogaan la Aanta Ethiopia
on May 24, 2013 12:52 am
Jijiga, Ethiopia, May 24, 2013 – Waxaa maanta lagu soo daabacay internetka lagu magacaabo Shaaciye.com, arimo been abuur ah oo lagu aflagaadaynayo masuuliyiinta dalka Ethiopia, gaar ahaana madaxwaynaha degaanka Somalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Qoraaga bogan oo ah nin la garanayo, ayaa si ku talo gal ah waxaa uu ugu daabacay bogiisa dacaayad raqiis ah. Waxaa uu ka mid yahay dadka Somalida ah ee ku nool qurbah ee sida xun u fikira, waxaana uu qoraalka fikirkiisa la xidhiidhinayaa dawlad gabaleedka Jubaland.
Waxaa uu qoray bogani warar been ah oo cidii aan waxba ogayn ay run u qaadan karto.
wuxuu qoray in madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ay dawlada Ethiopia ku canaanatay in uu ka hadlay arimaha Jubooyinka. Waxay sheegeen in warkaas laga siidaayey Radiofana Ethiopia, arinkaas oo been ah, aan filayana in been qoruhu uu dhagta uun ka maqlay radio Fana.
Shaaciyow waxaan jeclaan lahaa inta aadan wax qorin ee ayna qiira wali ah ku qaadin, in aad ogaato in madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar iyo degaanka Somalidu ay yihiin Ethiopian. Madxwaynaha iyo dadka degaanka Somalidu waxay ka shaqeeyaan danaha dalka iyo dadka Ethiopia ee ogow oo yuuna kuu muuqan uun magaca Somaligu.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, waxaa uu madaxwayne ka yahay degaanka labaad ee ugu wayn degaanada dalka Ethiopia, waxaana uu ka mid yahay shanta qof ee ugu awooda badan dalka Ethiopia.
Waxaad doonaysaa in aad Ethiopia u sheegto in uu Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar yahay Somali beel ahaana Ogadeen ah, Jubaland State-na ay si beel ah isugu haystaan beeshaada iyo beesha qaarkeed Ethiopian-ka yahay.
Shaaciyow waxaad ogaataa in Ethiopia ogtahay xaalka Somaliya iyo xiisada Jubaland State iyo in Madaxwayne Cabdi yahay Ogadeen, kolka ay doonto in ay adiga kula hadashana uu isagu kula hadli isaga oo Ethiopian ah.
Hadalka beenta ah ee aad galisay Internetka ee ah in Cabdi lagu canaantay Jubaland buu u tahniyadeed, waxbaadan ogayne waa lagu amaanay hadalkaas, waliba sida uu doono ayuu kaa yeeli adiga iyo Jaamac Jiiska Caydh ee Jijiga jooga.
Waxaad Isleedahay waxyeel sharafta masuuliyiinta Ethiopia, laakiin ogow waxaad garaacaysaa geed qudhaanjo leh. Waxa baafinaysidna adiga ayaa wax ku waayi.
VOA, iyo saaxiibadaada aad beenta siiso ee baahiyey in Booliska degaanka iyo Alshabaab ay ku dagaalameen xadka waa wax aan waxba ka jirin, waxaadse soo wadaa in aad bari tidhaahdo Booliska degaanka dad ku laayey dalka Somaliya. Caqli baadan lahayne ciidanka Ethiopia waa hal kuumana kal roona hadii ay colaadi timaado, ha biirsan colaad ay saxaafad kuu keento yaadan geeska Afrika ka falaagoobine.